Arcan, usoro maka imepụta GUI na desktọọpụ gburugburu | Site na Linux
Arcan, usoro maka imepụta GUI na desktọọpụ
Mgbe obere ihe karịrị afọ 4 site na mbipụta nke mbipụta ikpeazụ ikpeazụ, emewo ka amara Na nso nso a mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke injin desktọọpụ Arcan 0.6.0, nke na - agwakọta ihe nkesa ngosi, usoro mgbasa ozi, na injin egwuregwu iji hazie eserese 3D.
Arcane enwere ike iji mepụta usoro eserese dị iche ichesite na ihu onye ọrụ maka ngwa agbakwunyere na gburugburu desktọọpụ standalone.
The Safespaces desktọọpụ akụkụ atọ maka sistemụ arụmọrụ dị adị na ebe desktọọpụ A na-emepe Durden dabere na Arcan . Edere koodu oru ngo a na C ma kesaa ya n'okpuru ikikere BSD (ufodu ihe di n'okpuru GPLv2 + na LGPL).
1 Banyere Arcan
2 Banyere ụdị ọhụrụ nke Arcan 0.6.0
Arcane ọ bụghị kegide a iche iche ndịna subsystem y nwere ike na-agba ọsọ dị iche iche na usoro gburugburu (BSD, Linux, macOS, Windows) na-eji nkwụghachi azụ.
Maka ihe Arcan bụ a ọchịchọ ịmata Nchikota a gụgharia media processor, a game engine na a ngosi nkesa na- Site na ederede ederede nke dabara adaba na ngwa ngwa eserese na-arụkọ ọrụ ọnụ ma dịkwa mfe, yana jikọtara nke ọma na ihe ọ bụla site na ihu ọrụ ndị ọkachamara na ụfọdụ ọrụ arụpụtara nke ụlọ. ka tebụl zuru ezu.
Ọ dị ezigbo mma, O nwere nkwado ole na ole, mana batrị niile dị mkpa gụnyere.
Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịgba ọsọ na Xorg, egl-dri, libsdl na AGP (GL / GLES). Ihe nkesa ngosi Arcan nwere ike ịgba ọsọ X, Wayland na SDL2 ngwa ndị ahịa. Edepụtara nchedo, arụmọrụ na nbughari dị ka isi njiri mara maka Arcan API. Iji mee ka mmepe mmepe dị mfe, a na-achọ ịsụ asụsụ Lua.
Dentro nke njirimara ndị na-apụ na Arcan, anyị nwere ike ịchọta ndị na-esonụ:
Ngwakọta nke ihe nkesa mejupụtara, ihe nkesa ngosi na njikwa njikwa window.
Wuru na-multimedia kpuchie na-enye ngwá ọrụ maka ịrụ ọrụ na eserese, na-aga aga, video na ụda gụgharia nhazi, oyiyi nbudata, na-arụ ọrụ na video kpọọ ngwaọrụ.
Modeldị multi-threaded maka ijikọ ndị ọkwọ ụgbọala maka isi iyi data dị ike, site na mmiri vidiyo na mmepụta mmemme ọ bụla.
Isiokwu siri ike maka ịkekọrịta ihe ùgwù. E kewara ihe injinia n'ime obere usoro enweghị nchekasị nke na-emekọrịta site na iji kekọrịta òkè ebe nchekwa shmif.
Ejiri arụ ọrụ nyocha na nyocha, gụnyere injin ahụ, nwere ike ịme ihe ederede Lua iji mee ka mbibi dị mfe.
Ndabere ọrụ, nke bụrụ na nke ọdịda n'ihi a ahụhụ na usoro ihe omume, nwere ike na-amalite a ndabere ngwa, na-edebe otu mpụga data isi mmalite na njikọ.
Ngwaọrụ ịkekọrịta di elu ị nwere ike iji dekọọ ma ọ bụ debe obere mpaghara vidiyo na nke ọdịyo ka ị na-emekọrịta nkesa desktọọpụ.
Banyere ụdị ọhụrụ nke Arcan 0.6.0
Na nke ọhụrụ a, ndị mmepe kwuru na e lekwasịrị anya na nghọta netwọkụ.
Ejirila ụdị nke mbụ nke "arcan-net" nke ihe eserese eserese, nke na-enye ohere ịhazi ọrụ dịpụrụ adịpụ na ntanetị site na iji usoro A12 nke ya.
X11 style ahịa redirection na-akwado na ohere desktọọpụ dịpụrụ adịpụ dị ka RFB / RDP / SPICE, yana nkwanye na-abata, ọdịyo na vidiyo na-egwu egwu, nnweta nnweta, ndụ na ọtụtụ mwepụ ndị ahịa.
Ihe vidiyo vidiyo a na-ebute site na ya, na-adabere n'ụdị windo ahụ, na-ejikọkọta iji codec na-efu na ọnwụ.
Maka ederede nzuzo zoro ezo Nkwurịta okwu, A na-eji ngwugwu X25519 + Chacha8 + Blake3.
Mgbanwe ndị ọzọ gụnyere:
Ngwaọrụ maka ịgbagha ọrụ ndị ahịa.
KMSCon / FBCon ụdị njikwa.
Ikike igbaziri ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala mepụtara maka njikwa window na ngwa.
Ntinye ndị ọkwọ ụgbọ ala maka ngwaọrụ nyocha Tobii 4C.
XWayland Nkwado Ndozi Ndị Ahịa.
Arcan-trayicon akụrụngwa maka ịtụkwasị akara ngosi na sistemụ sistemụ.
Nkwado maka okwu synthesizers.
Redesign nke ọnọdụ ọrụ na sistemụ na - enweghị monitors (headless).
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Arcan, usoro maka imepụta GUI na desktọọpụ
Surfshark: Nyocha VPN ọrụ "shark"
Ka anyị zoo ndị ọzọ site na ACME na-eto